La Yaabka Dunida:Mulkiile Telefishin oo xaaskiisii furay, ka dibna Tv ka baahiyey – SBC
La Yaabka Dunida:Mulkiile Telefishin oo xaaskiisii furay, ka dibna Tv ka baahiyey
Posted by editor on Diseenbar 25, 2012 Comments
Mulkiilaha warbaahinta madadaalada ee Melody ka kooban Telefishino, Raadiyaal iyo Internet-ka ayaa dhawaan sameeyey arrin aan horey loo maqal loona arag ka dib markii uu xaaskiisii inta furey ka shaaciyey Telefishinada faraha badan ee uu leeyahay.
Jamaal Marwan oo ah mulkiilaha Meldoy Tv Channels wuxuu taariikh cusub u dhigay warbaahinta gaar ahaanTelefishinada dunida isagoo baahiyey in uu furey xaaskiisii Jihan oo hooyo u aheyd afar caruur ah oo uu dhaley iyadoo kan ugu yar uu dhashay bartamihii sanadkii hore sida Jamaal uu ku shaaciyey bogiisa Twitter-ka Internet-ka.
Jamaal iyo xaaskiisa ay kala tageen
Furiinka uu ku kacay Jamaal Marwan waxaa lagu macneeyey in uu ahaa kii ugu damiirnimada xumaa isagoo xaaskiisii markii ay kala tageen, ka baahiyey Telefishinada ogeysiis ku sheegayo in uu furay xaaskiisi Jihan isla markaana uu siin doono hal pound oo lacagta wadanka Masar maalin kasta oo ay isla noolaayeen xaaskiisa oo ay is qabeen 14 sano taasi oo aan la aqoon waxa uu ula jeedo.
Wargalinta furiinka xaaska mulkiilaha Melody Tv laguma soo koobin in laga baahiyo Telefishinka, ee wuxuu amar ku bixiyey in lagu baahiyo barta You Tube-ka ee Melody, iyadoo loo sii daayey qaab ogeysiis ah oo lagu bilaabay “Bayaan deg deg ah”, waxaana lau soo darey muuqaalka qoraalkii maxkamada ee furiinka, iyadoo lagu soo bandigay dalqadaha furiinka magacyada Jamaal iyo waliba magaca buuxa xaaskiisa uu furay Jamaal.
“Lama yaabani sida Jamaal uu u sameeyey arinkan, laakiin waxana la yaabanahay sida Aabe uu ugu sameyn karo waxan oo kale ilmihiisa, waxaan rumeysanahay in uu leeyahay afar cauur ah oo ay u dhashay Jihan, oo kan ugu yar uu dhashay sanadkii hore” sidaasi waxaa yiri qof ka mid ah dadka ku dhaw qoyskiisa.
HALKAN RIIX OO DAAWO VIDEO
Furiinka Jamaal uu furay xaaskiisa oo dhacay 13-kii bishan December waxaa la sheegay in ay udub dhexaad u aheyd muran ka dhashay haweenay Fanaan ah oo Lubnaan u dhalatey oo la sheegay inay wiil u dhashay, arintaasi oo uu beeniyey Jamaal.
Telefishinka MTV oo warbixin ka sameeyey furiinkan la yaabka leh ayaa tabiyey in Jamaal iyo xaaskiisa JIhan mudo muran ka dhex aloosnaa, isagoo maalmo ka hor furiinka u kicitimay wadanka Mareykanka, halkaasi uu ay ugu tagtey iyadoo ay jiraanm warar sheegaya inay isku dayeysay sidii loo xalin lahaa khilaafka, balse arintaasi waxay ku soo biyo shubatey furiin laga baahiyey telefishinada ninkeedii Jamaal.
Jamal Marwan oo waxaa dhashay Mono C/naasir oo ah haweenay uu dhalay Madaxweynihii hore ee Masar Jamaal C/naasir, aabihiis Ashraf Marwan oo ahaa ganacsade billionaire ah ku dhintey magaalada London sanadkii 2007-dii, isagoo la sheegay in uu ka soo dhacay dabaqa afaraad ee Hotel-kii uu deganaa, wallow ay jiraan warar sheegaya in daabaqada qolkii uu deganaa laga soo tuuray sida ay muujiyeen baaritaano la sameeyey.
Ashraf Marwan oo jirey 63 sano waxaa jira warar warbaahinta laga baaiyey oo sheegaya in uu ahaa Jaasuus Isra’il u shaqeyn jirey, inkastoo ay jiraan warar kale oo sheegaya in uu ahaa laba wajiile Isra’il iyo Masar sirdoonkooda ka tirsanaa.
Ashraf Marwan wuxuu la taliyaha dhanka amaanka u ahaa madaxweynihii hore ee wadanka Masar Anwar Al-Sadaat.
Jamal walaalkiis wuxuu qabaa gabar uu dhaley xoghayaha guud ee Jaamacada Carabta Caamir Mussa.
rooble m.dirir says:
Janaayo 3, 2013 at 7:31 am
ugu yaraan aad buu u jeclaa marka qalqalkii iyo nadintii uu u adkaysan waayey ayaa ku kaliftay in uu iska daldalmo oo meelkasta iyo qofkasta uu u sheego in uu waayey qof qaali ah